४ वर्षिय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने शिक्षकलाइ फाँसी, निर्मला हत्याराले कहिले पाउने यो सजाय? – Nepali News Portal – Trending Nepali News
४ वर्षिय बालिकाको…
४ वर्षिय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने शिक्षकलाइ फाँसी, निर्मला हत्याराले कहिले पाउने यो सजाय?
एजेन्सी । मनिस कति निच र निर्दइ हुन्छ, के देख्यो तेस्तो ४ वर्षिय बालिकामा? न त ति बालिकाको शारिरिक बनावट कलकलाउदो, भर्खरै १६-१७ वर्ष कि जवान केटिको छ । छि… सुन्दा पनि घिन लागेर आउछ । त्यसमाथि शिक्षक, यस्तो शिक्षकले कस्तो पाठ सिकाउला विध्यार्थीहरुलाइ? एक चार वर्षिय बालिका, जस्लाइ राम्रो सँग बोल्न पनि आउदैन, अझै बलात्कार के हो पनि थाहा हुदैन । घरबाट फकाएर/छुटाएर बलात्कार गर्यो, आखिर के गल्ती थियो ति अविध बालिकाको?
बलात्कार गरि दर्दनाक अवस्थामा ति पापी शिक्षकले छोडेर गयो । बलात्कृत ती बालिकालाई एयरलिफ्टकोको साहारामा सतनाबाट दिल्ली लगिएको थियो । मृत्यु भयो भन्ने ठानेर ति शिक्षक ति बालिकालाइ जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छोडेर फरार भयो । अन्ततः ति शिक्षकलाइ मार्च २ का दिन फाँसी दिईने निर्णय भएको छ ।
सतना जिल्लाको परसमनिया गाउँ भारतको मध्य प्रदेशमा पर्दछ । महेन्द्र सिंह गोंड नाम गरेका बलात्कारी शिक्षकलाइ भने बिहान ५ बजे २ मार्च जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस केन्द्रिय कारागारमा फाँसी दिने बताइएको छ । यस मुद्धामा निचली अदालतद्वारा फैसला गरिएको फाँसीको सजायलाई एमपी हाइकोर्टले पनि सदर गर्दै गत शनिबार दिनेश शर्माको अदालतले दुष्कर्मको डेथ वारेन्ट जारी गरिदिएको छ
२७ वर्षिय बलत्कारी शिक्षक हेन्द्र सिंह गोंडलाई अदालतले जबलपूरको सेन्ट्रल जेल अधीक्षकलाई पठाएको डेथ वारेन्टमा २ मार्चको बिहान ५ बजेको समयमा फाँसी दिन आदेश दिएको छ । सन् २०१८ जुलाई १ तारिखको रातिको समयमा चार वर्षीया एक अबोध बालिकालाई आरोपित महेन्द्र सिंह गोंडले बलात्कार गरेकाले जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । घटना घटेको दोस्रो दिननै तत्कालीन कलेक्टर मुकेश शुक्लाले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानसँग कुरा गरेर पीडित ती अबोध बालिकालाई एयरलिफ्ट गर्दै दिल्ली स्थित एम्समा भर्ती गरेका थिए ।
अष्ट्रेलियामा शक्तिशाली बाढी आउदा दुइ जनाको मृत्यु